Ny fomba fanaovana fikarohana voalohany dia mamadika ny marika ho mpitarika indostrialy | Martech Zone
Ny fomba fanaovana fikarohana voalohany dia mamadika ny marika ho mpitarika indostrialy
Alakamisy, Desambra 5, 2013 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Ny mpivarotra dia nitodika tany amin'ny marketing marketing, media sosialy, dokam-barotra zanatany ary tetikady marketing am-polony hafa hananganana fifandraisana amin'ireo olona kendreny. Ireo matihanina amin'ny varotra dia mitady teknika sy paikady vaovao hananganana ny fahefan'ny marika sy ny maha izy azy. Fomba tokana anehoan'ny orinasa maromaro ny satan'izy ireo mpitarika ny indostria dia amin'ny famoronana tsy manam-paharoa fikarohana voalohany sady azo itokisana no ilaina amin'ny mpamaky azy io.
Famaritana ny fikarohana eo amin'ny tsena voalohany: fampahalalana izay mivoaka mivantana avy amin'ny loharano – izany hoe ny mpanjifa mety. Azonao atao ny manangona an'io fampahalalana io amin'ny tenanao na manakarama olon-kafa hanangona izany ho anao amin'ny alàlan'ny fanadihadiana, vondrona mifantoka ary fomba hafa. Famaritana avy amin'ny Mpandraharaha
Janna Finch, tonian-dahatsoratra ao amin'ny Torohevitra momba ny lozisialy, orinasam-pikarohana iray izay manome famerenana maimaimpoana ireo rindrambaiko marketing, tato ho ato namolavola tatitra izay manome ohatra efatra amin'ny orinasa izay nampiasa fikarohana voalohany ho paikady marika mahomby. Nanapa-kevitra ny hahatratra an'i Finch izahay ary hijery izay fampahalalana fanampiny nozarainy momba ny fampiasana ity paikady ity. Ity no natolony:
Ahoana no ahafahan'ny fikarohana voalohany manampy amin'ny fananganana fahefan'ny marika?
Fantatry ny mpivarotra fa ny famoahana vaovao izay nozaraina imbetsaka dia tsy ampy hampitomboana ny fahombiazan'ny fikarohana na hampivelarana ny mpamaky izay niteraka fitarihana sy fiovam-po. Tsy fomba fahandro hahombiazana izany, ary tsy hahomby izany manavaka ny marikao avy amin'ny marika hafa.
Ny atiny avo lenta sy am-boalohany dia fomba tsara hiakatra ambonin'ny tabataban'ireo mpifaninana aminao ary ny fikarohana voalohany dia mifanaraka tanteraka amin'ilay volavolan-dalàna. Ny fikarohana voalohany, rehefa tanterahina tsara, dia manome ny atiny manaparitaka izay tsy manam-paharoa ary tsy hita amin'ny toeran-kafa satria vaovao.
Ny famoahana ny fikarohana voalohany dia misy tombony lehibe:
Ny atiny zaraina: Mitady fitaovana vaovao sy manaitaitra foana ny olona ary manalavitra ny atiny izay zaraina in-jatony amin'ny fihodinana hafa kely. Ny fikarohana tany am-boalohany dia manana vintana tsara kokoa hahaliana sy mahasoa, izay midika fa ny olona dia mety handefa bitsika kokoa azy, toa azy io, hametaka azy io na handefasanao bilaogy momba izany.
It manasongadina ny fahefanao momba ilay lohahevitra: Tsy mora ny manao tetikasa fikarohana voalohany. Mila ora maro sy fanoloran-tena ho an'ny lehilahy maro izany. Fantatry ny olona izany ary fantany fa raha matotra tsara ny orinasanao hanao tetik'asa fikarohana lehibe dia azo inoana fa manam-pahefana amin'izany ianao.
Manana fahefana amin'ny fananganana koa SEO fiantraikany. Arakaraka ny hametrahan'ny olona matoky ny marikao sy hanaja ny atiny no hizarana sy hifamatorana ny fitaovanao. Ny motera fikarohana dia mamaritra fa raha atiny mizara be dia be ianao dia azo inoana fa loharano sarobidy. Raha hitan'i Google ao anaty atiny ity fifandraisan-davitra ity dia hitondra fahefana bebe kokoa ny marikao ary hanomboka hiseho avo kokoa amin'ny SERPs ary olona maro kokoa no hitsidika ny tranokalanao. Ny mpitsidika marobe matetika dia midika fiovam-po bebe kokoa.
Fa maninona no manakiana orinasa lehibe ny fananganana marika manam-pahefana amin'ny Internet?
Matetika ny olona mitady orinasa satria matoky ny marika misy azy ireo, na manome ny vaovao notadiaviny, na efa niainany zavatra tsara taloha. Amin'ny alàlan'ny fananganana fahefana marika bebe kokoa dia manangana fahatokisana koa ianao. Rehefa matoky ny orinasanao ny olona ary mihevitra anao ho mpitondra, dia mety hitarika fitarihana sy fidiram-bola bebe kokoa izany amin'ny farany.
Zava-dehibe indrindra amin'ny Internet izany. Arakaraka ny maha-manam-pahefana anao ny marikao, dia azo inoana kokoa fa hanana laharana ambony amin'ny valin'ny fikarohana izy io. Arakaraka ny maha-ambony ny laharan'ny orinasa eo amin'ny pejy valin'ny fikarohana an'i Google no ahitanao ny marikao ary ny fahitana lehibe kokoa dia midika hoe vola miditra bebe kokoa. Raha tsorina, tsy misy mividy amin'ny tranokala tsy hitany mihitsy.
Misy ohatra ny marika iray izay nahomby tamin'ny fampiharana ity paikady marketing ity?
Misy orinasa maromaro izay nampiasa tsara ny fikarohana voalohany hananganana ny fahefan'ny marika. Orinasa iray manokana indrindra no nahita fahombiazana miavaka tamin'ny fampiharana an'io paikady io - Moz. Moz dia manam-pahefana amin'ny fanatsarana ny motera fikarohana (SEO) efa ho folo taona. Na eo aza izany, amin'ny fiezahana hihazona ny satan'izy ireo amin'ny maha-lohalaharana loharano-loharano loharano SEO, dia mitady fikarohana voalohany ihany koa izy ireo.
Moz dia nanadihady maherin'ny 120 mpivarotra SEO ambony hanangonana ny heviny momba ny laharan'ny milina fikarohana 80 mahery. Moz nanangona ny angona ary namolavola sary sy famintinana angona mora vakiana ho an'ny famakiana sy famakiana be indrindra. Ny fanapaha-kevitr'izy ireo hitodika any amin'ny fikarohana voalohany dia tena nahomby satria nanolotra fikarohana mahasoa sy azo antoka ireo mpivarotra SEO izay tsy azon'ny olon-kafa atolotra. Ity ezaka ity dia nahazo rohy 700 teo ho eo ary fizarana ara-tsosialy maherin'ny 2,000 (ary manisa!). Ity karazana fahitana ity dia tsy mampitombo ny fahefan'ny marika fotsiny, fa manamafy ny lazany koa ho loharanom-baovao SEO malaza sy fomba fanao tsara indrindra.
Inona ireo sosokevitra anananao ho an'ny orinasa hafa izay mihevitra ny hampiasa fikarohana voalohany hananganana ny fahefan'ny marika?
Fantaro fa ny famoronana fikarohana ambaratonga voalohany avo lenta dia mitaky fotoana sy ezaka be. Toy ny tetik'asa lehibe rehetra, kritika ny tetikady sy ny drafitra. Ireto misy fanontaniana vitsivitsy tokony hapetrakao amin'ny tenanao alohan'ny hanombohanao manangona angona:
Inona no tiako ho fantatra?
Ahoana no fomba hanangonako an'ity karazana fampahalalana ity? Anontanio ny tenanao raha ny fomba tsara indrindra hanangonana ny angona dia ny fanaovana fanadihadiana azo zaraina, na ny fanadinadinana vondron'olona manam-pahaizana vitsivitsy, na raha afaka manangona ny angona ianao amin'ny fanaovana ny fandinihanao manokana.
Ahoana no hahasoa ny mpanjifa na ny mpihaino ahy ny valin'ity tetikasa ity? Azonao atao ny mamakivaky ny hetsika sy ny asa mafy rehetra amin'ny fanangonana angona angona kalitao, fa raha tsy mahasoa, mahaliana ary zaraina mora, ahoana no hanampiany ny fahefanao?
Raha miatrika ireo fanontaniana ireo ianao dia efa mialoha ny mpifaninana aminao maro.
Efa nampiasa fikarohana voalohany ve ianao hananganana ny fahefan'ny marika? Azafady zarao eto ambany ny tantaranao na ny hevitrao.
Tags: Janna FinchMozFikarohana momba ny tsena voalohanyfikarohana voalohanyfikarohanatoro-hevitra amin'ny lozisialy
WordPress: Antony 3 hametrahana Jetpack Ankehitriny!